Soomaaliya oo xubin ka noqotay shabakadda Caalamiga ah ee Bad Baadada Cuntada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Soomaaliya oo xubin ka noqotay shabakadda Caalamiga ah ee Bad Baadada Cuntada
Soomaaliya oo xubin ka noqotay shabakadda Caalamiga ah ee Bad Baadada Cuntada
Wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda Federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in Soomaaliya ay xubin ka noqotay shabakadda caalamiga ah ee bad baadada cuntada, isagoo dhinaca kale xusay in wasaaraddu ay wado qorshe ah in ciidamada Qaranka ay quutaan raashinka dalka kasoo baxa oo ka tayo badan tan dibadda laga keeno.
Wasiirka Beeraha Soomaaliya, Siciid Xuseen Ciid
Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ah ee bed-qabka Cunnada oo markii ugu horreysay sannadkaan laga xusay dunida oo lagu qabtay Muqdisho. xuska waxaa ka qaybgalay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay qaabka ugu haboon ee looga shaqeyn karo badbaadada cuntada laguna horumarin karo wax soo saarka dalka iyo sida caafimaad qabka bulshadu uu ugu xiran yahay quudashada cunta bed-qabta.
Ra’isul Wasaare Ku-xigeenka Federaalka Mahdi Maxamed Guuleed
Agaasmiaha guud ee Wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali wuxuuna tilmaamay in qatarta ugu badan ay ka timaado cuntooyinka banaanada lagu gado oo laga dhaxlo cuduro kala duwan.
Ra’isul Wasaare Ku-xigeenka Federaalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in ay dowladdu dhiirri gelinayso sare u qaadidda wax soo saarka dalka iyo quudashada dalagga ka baxa beeraha dalka.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa meel marisay sharciga Hay’adda dhowrista tayada iyo Sharciga dawada oo dhammaan qayb ka qaadanaya bed-qabka cunnada dalka.